Xukunkii muddada dheeraaday ee xisbigii EPRDF ee ay gacanta ku hayeen TPLF ka dib – Kaydka Xogaha Dahsoon Iyo Xaqiiqooyinka Foolaad.com
HomeFAALOXukunkii muddada dheeraaday ee xisbigii EPRDF ee ay gacanta ku hayeen TPLF ka dib
Isbadalada iyo xaaladaha cakiran ee Ethiopia
, mudaharaado ayaa guud ahaanba Itoobiya ka bilaabmay horraantii sannadkii 2015kii. Mudaharaadadaas waxa hoggaaminaayay qoomiyadda Oromada oo uu hormood u yahay Jawaar Maxamed oo Maraykanka ku noolaa iyo garabkiisii dhalinyarada ee Qeerroo iyo rag kale oo door ah. Muddo Saddex sannadood ah ka dib, waxa xilkii iska casilay Raysalwasaarihii dalka, waxaana xilka loo dhiibay Abiy Axmed oo asalkiisu uu Oromo yahay, balse la Axmaareeyey, Hooyadiina ay Axmaaro tahay. Halkan isbeddel xooggan ayaa ka bilaabmay. Waxa la baa’biiyay xisbigii EPRDF. Waxa arrintaas ka gadooday ururkii Tigrayga ee TPLF. Taasi waxay keentay in ay isku urursadaan gobolkooda Woqooyiga ku yaala ee Tigray. Ugu dambayntiina dabayaaqadii sannadkii 2020kii waxay aqoonsiga kala noqdeen maamulkii Abiy Axmed. Waxaanay doorashooyin dawladda dhexe aanay aqoonsanin ay ka qabteen gobolkooda Tigray, dawladdii Abiy Axmed na waxay tallabadaasi ku sheegtay mid sharci darro iyo dastuur jabin ah. Halkaas waxa ka bilaabmay isku dhac militari oo u dhexeeya TPLF iyo maamulkii Abiy Axmed ee Addis Ababa.
Horraantii Bisha November, 2020kii ayay Ciidamada Itoobiya duullaan rasmi ah ku qaadeen Gobolka Tigray ee Woqooyiga dalka Itoobiya. Dagaalkaasi wuxuu keenay muddo Saddex bilood ah ka dib in guud ahaanba gobolka Tigray ay la wareegaan ciidamada Itoobiya. Waxa dhimasho, dhaawac, qaar nolosha lagu qabtay iyo qaar baxsaday u qaybsamay Kaadiriyiintii TPLF. Dagaalka waxa ka qaybgalay guutooyin ka socda Ciidamada Xoogga ee dalka Eritrea iyo diyaaradaha dagaalka ee Imaaraadka Carabta, sida ay sheegeen ilo wareeyo kala duwan oo lagu kalsoonaan karo. Waxa sidoo kale ka qaybgalay maleeshiyaad Axmaaro ah oo aarsidoon ah.
Badhtamaha bishii January, 2021ka, waxay Ciidamada Itoobiya shaaciyeen in ay dileen Kaadirkii weynaa ee Tigrayga Seyoum Mesfin isaga oo ku dhuumanaya mid ka mid ah godad ay galeen hoggaankii jabhaddii TPLF oo xukunka gobolkooda Tigray xoog lagaga fara maroojiyay. Seyoum Mesfin oo la garwacay waxay la mid tahay Meles Zenawi oo la gawracay. Haddaba bal u fiirso sida maalmuhu isu beddeleen.
Bishii January, sannadkii 2009kii ayay dagaal lagu hoobtay oo ay ku dhinteen kumannaan Soomaali ah iyo kumanaan ka mid ah Ciidamada Itoobiya ka dib, waxa magaalada Xamar ee caasimadda Soomaalida ka baxay ciidamadii Itoobiya oo muddo laba sannadood ah ku sugnaa gudaha magaalada Xamar. Ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya ee Xamar waxay markhaatigii ugu dambeeyey u furtay inaanay Itoobiyaanku dalka Soomaaliya marna xoog ku qabsan karin, xeelad mooyaane. Itoobiya xilligan waxa hoggaaminaayay hoggaamiyihii ka soo jeeday qoomiyadda Tigrayga Meles Zenawi. Waxa Wasiirka Arrimada Dibadda ahaa Seyoum Mesfin oo ay isku qoomiyad ka soo jeedeen. Labadaas nin iyo Itoobiya oo ay xukumayeen waxay Xamar iyo guud ahaan Soomaaliya ku gumaadeen kumanaan Soomaali ah.
Gabaygan Hiiraal oo soo baxay January, 2021ka, waxa uu ka hadlayaa dhacdooyinkaas isa saaran, waxaanu si gaar ah uga hadlayaa hagardaamooyinkii TPLF ay Soomaalida si gaar ah ugu gaysatay. Sidoo kale, waxa uu gabaygu ka hadlayaa, in isbeddelka ku yimid gudaha Itoobiya aanu marna wax ka beddeli doonin aragtidii gumaysiga ahayd ee ay Itoobiya ku dhisnayd. Waxa uu Soomaalida xusuusinayaa in aragtida Itoobiya ee ku salaysan gumaysiga Soomaalidu ay halkeedii taalo, waxaanu jeclaysanayaa in guusha Soomaalidu ku jirto in labada qolo aanu midna guul kama dambays ah gaadhin ee laysla meereysto. Tigraygii oo mar kale caasimaddoodii qabsaday ayaan qoraalkan ku xusuustay.
Faallada Abwaan Nageeye cali khaliif